Big City Small World (Series 1 Episode 10 - You'll beashoo-in!) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on September 28, 2012 at 10:39 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series 1 Episode 10 - You'll beashoo-in! ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Magda သည် သူမ၏ အိမ်မက်အလုပ်ကို Johnny ၏ အကြံဥာဏ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ရနိုင်ပါမည်လော?
နည်းနည်းပိုကောင်းလာပြီ... ကျောက်ပတ်တီးခွာလိုက်ပြီ ဒါပေမယ့် ချိုင်းထောက်လိုနေတုန်းပဲ။
နင့်တူလေး Joe ကတော့ ကူညီရာမရောက်ပါဘူး... သူဒီနေ့ဒီမှာ မရှိဘူးမဟုတ်လား? ငါ သက်သာဖို့လိုအပ်တယ်!
ဟင့်အင်း စိတ်မပူပါနဲ့... ငါဒီနေ့သူ့ကို ထိန်းစရာမလိုဘူး။ သူက ဒီနေ့ ငါ့အစ်မနဲ့။
နင့်အသံက သေချာပုံ သိပ်မပေါက်ဘူး...
မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ပါ အရာရာ အဆင်ပြေပါတယ်...
အလုပ်မှာ အကုန်အဆင်ပြေရဲ့ လား? ငါမင်းကို သိပ်မတွေ့ဖြစ်ဘူး…
အင်း။ မင်းသိတဲ့အတိုင်း ငါကအမြဲအလုပ်များနေတာကိုး...
Johnny: Oh yeah, I know ... busy busy busy. That’s me, too! Got to go right now... just to the doctor’s though, he’s having another look at my leg, making sure it’s ok...
သြော် ဟုတ်သားပဲ။ ငါသိတယ်... အလုပ်များတယ် များတယ် များတယ်။ ငါလဲတူတူပဲ။ ခုသွားရတော့မယ်... ဆရာဝန်ဆီပါပဲ။ သူက ငါ့ခြေထောက်ကို နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ကြည့်ဦးမယ်တဲ့ သေချာအောင်လို့တဲ့...
တာတာ့ Johnny! အဆင်ပြေပါစေ!
ငါလည်း တူတူပါပဲ! အိုး… Magda! ကြည့်လုပ်ပါဟ!
အို၊ တောင်းပန်ပါတယ် Johnny!
အို! ငါနင့်ခြေမကို တက်နင်းလိုက်မိတယ်!
စိတ်မပူပါနဲ့... ကိစ္စမရှိပါဘူး… ဘာမှ ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ဘူး… ငါပြန်ကောင်းလာမှာပါ!
ငါ ဆရာဝန်ဆီ အခုသွားမှာမို့လို့ တော်သေးတာပေါ့။ တာ့တာ။
အို မဟုတ်သေးပါဘူး။ ငါစိတ်မကောင်းလိုက်တာ!
စိတ်မပူပါနဲ့။ သူက အဲ့လောက်ဆိုးတာမဟုတ်ပါဘူး! သူ အရိုးတွေဘာတွေ ကျိုးသွားတာမှ မဟုတ်တာ။
ပြောပြစမ်းပါဦး... သူက အလုပ်မှာတော်တော်ညံ့တာ! ငါသူ့ကို ကြိုးစားပြီး ရှောင်နေရတယ်…
သူက သူ့အလုပ်အကြောင်းကို အချိန်တိုင်းပြောနေတယ်လေ၊ သူဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ် ပြီးတော့ သူဘယ်လို ချမ်းသာလာမှာ... အဲ့ဒါက ပျင်းဖို့ကောင်းလာပြီ...
ဒါပေမယ့် ပေါင်းရတာတော့ အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား?
အင်း ဟုတ်ပါတယ်… သူတို့က ငါ့ကို လခအတွက် အပြင်းအထန်တော့ လုပ်ခိုင်းတယ်ဟ…
နည်းနည်းတော့ ကြာမယ်၊ အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ ကြည့်ရဦးမယ်၊ ရေရှည်လေ…
တစ်ယောက်မှ ငါ့ရဲ့  လူတွေ့စစ်ဆေးပွဲအကြောင်းမမေးကြဘူးလား?
အို ဟုတ်သားပဲ… တောင်းပန်ပါတယ်! ဟုတ်တာပေါ့၊ ကဲ၊ အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ?
သိပ်တော့မသေချာဘူး…အဆင်ပြေတယ်လို့တော့ ထင်တယ်… ပြောဖို့တော့ခက်တယ်…
နင့်ကို သူတို့ ဘာမေးခွန်းတွေမေးလဲ?
မေးနေကျပဲပေါ့… ငါဘာလို့ဒီအလုပ်ကို လိုချင်တာလဲ၊ သူတို့ ကုမ္ပဏီကို ငါဘာသယ်ဆောင်လာပေးနိုင်မလဲ…
အင်း... ငါမေးခွန်းတစ်ခုပဲမေးဖို့ အခွင့်အရေးရလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ ငါက လုပ်ငန်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအနေနဲ့ ငါကိုယ်ပိုင် စီမံကိန်းတွေလုပ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လောက်အထိ ခွင့်ပြုမှာလဲ လို့မေးလိုက်တာပေါ့။
အနောက်တိုင်း ၀တ်စုံပေါ့ Johnny ပြောသလိုပဲလေ ဂျာကင် အနက်ရောင်နဲ့ ဘောင်းဘီရှည်နဲ့…
နင် shoo-in ဖြစ်လိမ့်မယ်!
shoo-in လေ! အဓိပ္ပါယ်ကတော့ နင်အဲ့ဒီအလုပ်ကို အသေအချာရမှာ!
အင်း၊ ငါလည်းမျှော်လင့်တာပါပဲ... အို မဟုတ်သေးပါဘူး! အဲ့ဒါသူတို့ပဲ... ငါအလုပ်ရမရဆိုတာ ဖုန်းဆက် မှာ..
Permalink Reply by Khin Nwe on September 28, 2012 at 19:22
Permalink Reply by yaharzinbo on September 29, 2012 at 21:55
Permalink Reply by 150yviqpiqnjs on October 22, 2012 at 7:14
Permalink Reply by Rihanna on July 15, 2013 at 23:56